हिमाल खबरपत्रिका | 'जिन्दगीको अन्तिम दस्तावेज
'जिन्दगीको अन्तिम दस्तावेज
हालै आत्मकथा 'महको म' लिएर आएका कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ भन्छन्, “यो पुस्तक मेरो जिन्दगीको अन्तिम दस्तावेज हो।”
'महको म' लेख्ने सोचाइ कसरी आयो?
६ वर्षअघि अमेरिकाको न्यूजर्सीमा बस्ने दिलकृष्ण श्रेष्ठले पुस्तक लेख्न सुझाएका थिए। उनले मुख्य घटनाक्रमलाई सुत्नुअघि टिपोट गरेर राख्न सिकाएका थिए। मैले पनि त्यस्तै गर्दै गएँ। तर, मेरो यो कामले निरन्तरता पाएन।
श्रीमतीलाई क्यान्सर भयो। उनको उपचारमा लागें। दुई वर्ष केही लेख्न सकिनँ। श्रीमतीलाई निको भएपछि पनि निरन्तर रुपमा लेख्न सकिनँ। कहिले त दुई/तीन महीनासम्म पनि लेखिंदैनथ्यो। पछिल्लो समय भने शुरु गरेको काम जसरी पनि पूरा गर्नुपर्छ भनेर लागें। तिनै टिपोट गरेका घटनाक्रमलाई पुस्तकको रुप दिन सफल भएँ।
किन 'महको म' पढ्न आवश्यक छ?
मलाई नेपाली दर्शक, श्रोता तथा जनताले धेरै माया दिनुभएको छ। 'मह' जोडीका रुपमा हरिवंश आचार्य र मैले हँसाउने कोशिश गर्‍यौं। सबैले हाँसो मात्रै देखेका छन्, त्यस पछाडिका गाह्रोसाह्रो, दुःखपीडा, रमाइलो थाहा पाएका छैनन्। यो पुस्तकमा मेरा जीवनका तिनै भोगाइ, अनुभव, मेरो सफलता, असफलताका कथाहरु छन्। मैले सिकेका नयाँ कुराहरु छन्। नेपाली दर्शक, श्रोताले जस्तै पाठकले पनि माया गर्नेछन्।
यो लेख्न कत्तिको गाह्रो भयो?
पुस्तक लेख्न शुरु गर्दा जस्तो थिएँ, पुस्तक लेखिसक्दा त्यस्तो रहिनँ। लेख्दै गर्दा अस्वस्थ भएँ। हातले कामै गर्न छोड्यो, अघि सार्नै नसकिने समस्या देखियो। परीक्षण गराउँदा चिकित्सकले पार्किसन् (मस्तिष्कको कुनै तन्तुमा समस्या आउने र त्यसले गर्दा शरीरको कुनै अङ्गले काम नगर्ने) रोग लागेको बताए। जे भए पनि लेख्ने काम सक्नुपर्ने थियो। उच्च अठोटका साथ लेखें। पार्किसन्ले गाह्रो बनायो।
यसपछि के लेख्ने विचार छ?
यसभन्दा अघि वन्यजन्तु, पशुपक्षी संरक्षणको आवश्यकताका विषयमा पुस्तक लेखेको थिएँ, 'साझा पृथ्वी'। त्यो मेरो पहिलो पुस्तक हो। ७० वटा बोर्डिङ स्कूलमा पढाइन्छ। यो चाहिं आत्मकथाका रुपमा लेखेको छु। अब के लेख्छु, सोचेको छैन। तर 'महको म' पुस्तक मेरो जिन्दगीको अन्तिम दस्तावेज हो।
थुप्रै पुस्तक पढ्नुभयो होला, अहिले लेख्नुभएको छ। पुस्तक किन पढ्नुपर्छ?
पुस्तक भनेको ज्ञानको भण्डार हो। ज्ञान विनाको मानिस कुहिरोको काग जस्तै हुन्छ। नयाँ कुराहरु सिक्न र अगाडि बढ्न पनि पुस्तक पढ्न जरुरी छ। अर्को कुरा पुस्तक पढ्ने बानीले मानिसको सोच्ने दायरा फराकिलो बनाउँछ।